Thenga ukuJongwa kweYouTube- YTpals
Zithini izibonelelo zokuthenga iimbono ze-YouTube?
Ikhuthaza abantu ukuba babukele iividiyo zakho
Iimbono zoncedo zonyusa iZikhundla zeeNjini zoKhangelo
I-100% Ukuhanjiswa okuQinisekisiweyo okanye ukuBuya kweMali yakho
I-100% iQinisekisiwe ekuVuseni iVidiyo ukuba ikhe ibekho
Sisoloko siHambisa ngaphezulu koKuyalela!
Iziphumo ziya kuqalisa ukuvela kwi24-72 Hours
Yahlula phakathi kweevidiyo ezininzi (Iimbono ezili-1,000 10,000 ngeVidiyo nganye ubuncinci). Uku-odola ii-1 Views kunye nokwahlula phakathi kwe-10 ukuya kwi-XNUMX yeVidiyo.
Iindlela eziqinisekisiweyo zokuthenga iiJongo zikaYouTube ngo-2022
IYouTube yindawo ethandwa kakhulu yokusasaza kwi-intanethi apho abasebenzisi abangaphezu kwebhiliyoni balayisha izigidi zeeyure zomxholo suku ngalunye. Ukusuka kwisiqulatho sokuyila, izifundo, iividiyo zomculo,' indlela yokukhokela,' uphononongo lwemveliso ukuya kwiividiyo ze-unboxing, iYouTube inoluhlu olunomtsalane lwesiqulatho esithandwa ngabantu.
Liqonga elifanelekileyo lokubonisa iitalente zakho, ukusasaza ulwazi, ukwenza impembelelo okanye ukukhuthaza uphawu lwakho. Ngaphandle kokuba yeyona webhusayithi yokusasaza umxholo, iYouTube lijelo elikhethiweyo lamashishini kunye nabo bafuna ukufumana imali. Ngokuxhomekeke kwiimethrikhi ezifana nenani leembono, ukuthanda, kunye nababhalisi onakho, unokwenza inkunzi. Izibonelelo ezininzi zokuba nguYouTuber odumileyo sisizathu sokuba abantu bathenge iimbono zeYouTube.
Ukuba ujonge ukuqala isitishi sakho sikaYouTube ngo-2022, ukuthenga iimbono kuya kukunceda ukhawulezise uhambo lwakho lokuba nguYouTuber ophumeleleyo. Xa kuziwa ekuthengeni iimbono zeYouTube, ayizizo zonke iisayithi okanye abathengisi abadalwe ngokulinganayo. Ukwazi ukuthenga iimbono ezizisa iziphumo ozifunayo kubalulekile ekuqhubeni isicwangciso sakho sika-YouTube sika-2022.
Yintoni ebaluleke njengombono kaYouTube?
Ngaphambi kokuba ujonge indawo efanelekileyo yokuya kuyo ukuthenga izimvo YouTube, ukuqonda oko kubalulekileyo njengembono kubalulekile. UYouTube ubala iimbono ngokuxhomekeke kwezi nqobo zokugweba:
Umsebenzisi ucofa kwividiyo ngenjongo yokubukela ividiyo.
Umsebenzisi ubukela ividiyo ubuncinane imizuzwana engama-30.
Iimbono zakho ziya kubala xa udlala ividiyo yakho yeYouTube, kuphela ukuba uyijonga kube kanye okanye kabini. Ukuhlaziya rhoqo iphepha ukunyusa iimboniselo ngokuzenzekelayo akusayi kubalwa njengeemboniselo.
IYouTube iya kubala imboniselo ukuba uchitha ngaphezulu kwemizuzwana engama-30 ubukele ividiyo kodwa utsibe kuyo. Ukubukela ividiyo ngaphantsi kwemizuzwana engama-30 akuyi kubalwa njengombono weYouTube. Umda wokubukela imizuzwana engama-30 ubalulekile kuba oku kunceda iqonga libone ukuba ividiyo inokwenza imali na. Iividiyo ezingaphantsi kwemizuzwana eyi-30 azinakukwazi ukwenza imali.
Ngeembono ezingezizo zodwa, naluphi na utyelelo kwakhona kunye nomdlalo kwakhona kubalwa njengeembono. Ideshibhodi yohlalutyo lukaYouTube ibonisa ababukeli abakhethekileyo ukuba ufuna ukwazi le metric.
Iimbono eziphindaphindiweyo ezivela kwabanye ziya kubalwa kuphela njengeembono ukuya kumlinganiselo. I-YouTube ayiwuchazi umda wokuyeka ukubala iimbono. Iingcali zikaYouTube zikholelwa ukuba iqonga libala ukuya kuthi ga kwiimbono ezine okanye ezintlanu ngosuku kodwa liyayeka ukuhlaziya ukubalwa kwemboniselo emva kweli nani. Ngelixa kuqhelekile ukucinga ukuba ukufumana amalungu eqela, abahlobo, okanye usapho ukuba babukele iividiyo ngokuphindaphindiweyo kuya konyusa iimbono, oku akunakwenzeka.
Ukuba iimbono 'zezenziwe,' isoftwe yeYouTube iyazibhaqa kwaye izicime. Nantsi imiqondiso eyimpawu zengxaki kuYouTube:
Ukuhlaziya rhoqo-Ukuba umsebenzisi omnye uhlaziya ividiyo rhoqo ukuzisa amanani, ayizukubalwa njengeembono ezongezelelweyo.
Iintsholongwane-I-malware eyenzelwe ukwenzakalisa inethiwekhi, iseva, okanye ikhompyuter.
Ukuzidlalela ngokuzenzekelayo-Ividiyo emiselwe ukuzidlalela kuyo nayiphi na iwebhusayithi ayiyi kubalwa njengembono.
Izimvo zogaxekile - Ukuba umsebenzisi ushiya izimvo ze-spam, i-YouTube ayiyi kubala iwotshi yabo njengembono.
Ividiyo efakwe ngaphakathi-Ngelixa isigwebo sokuba iividiyo ezifakiweyo zibalwa njengeembono eziphikisanayo, iYouTube ayinakubala iividiyo ezifakwe kwiphepha lewebhu kwaye zisetelwe ukuzidlalela. Kwimeko apho ividiyo efakiweyo ilayisha ngokuyinxenye kuphela, isenza ukuba umsebenzisi ahlaziye ividiyo amatyeli aliqela, ezi mbono nazo aziyi kubalwa. Ividiyo efakwe ngaphakathi kufuneka ilayishe ngokupheleleyo kwaye icoceke, kwaye umbukeli kufuneka acofe ngenjongo kwividiyo yeYouTube ukuba ayibale njengombono.
Zihlaziywa kangaphi iimbono?
Ngelixa olu lwazi lungapapashwanga yiYouTube, abasebenzisi beYouTube abanamava bayazi ukuba iimbono azihlaziywa ngoko nangoko. Ngokwesiqhelo, iimbono zeYouTube zihlaziywa rhoqo kwiiyure ezingama-24 ukuya kwezingama-48.
I-YouTube Live: Ngaba ezi mbono ziyabala?
IYouTube ayivumeli abantu ukuba balayishe iividiyo ezirekhodiweyo kuphela kodwa inomboniso wevidiyo ephilayo. Oku kuvumela abasebenzisi ukuba babukele iividiyo ezidlala bukhoma ngexesha lokwenyani. Iimbono ezibukhoma zikwabalwa njengeembono zikaYouTube, ezifanayo neembono zeevidiyo ezirekhodiweyo. Kanye njengeevidiyo ezirekhodwe kwangaphambili, ukubalwa kwevidiyo ephilayo kuya kulungiswa xa abasebenzisi
Uhlaziya amaphepha rhoqo.
Bukela ividiyo ngaphantsi kwemizuzwana engama-30.
Sebenzisa idilesi ye-IP efanayo ngexesha elinye kwizixhobo ezininzi.
Vula iifestile ezahlukeneyo ngelixa ubukele ividiyo.
Ngubani ekufuneka athenge iimbono zikaYouTube?
Ukuthenga iimbono zikaYouTube kunye nabalandeli kunokukunceda ufezekise injongo yakho yokuba ngumntu we-intanethi. Ngaphandle koku, ubuchwephesha obahlukeneyo banokuxhamla ekuthengeni iimbono zeYouTube kunye nabalandeli, njengale:
Abaculi -Iividiyo zomculo lolona hlobo ludumileyo lomxholo kuYouTube. Ukuba uyimvumi efuna ukubonisa italente yakho ekhethekileyo kwihlabathi, akukho qonga lingcono kuneYouTube. Xa uhlawulela iimbono, unokonyusa unxibelelwano kunye neevidiyo zakho kwaye ufumane ukuvezwa okungcono. Oku kunokukuvulela amathuba amaninzi okwandisa ukufikelela kwakho kwaye ufumane udumo kwi-intanethi.
Iingcali ze-SEO kunye nabadali bomxholo -Iingcali ze-SEO kunye nabadali bomxholo banokuzuza ngeendlela ezininzi ngokuthenga iimbono zeYouTube kunye nesiseko sobhaliso. Oku kunokunceda ukulungisa izicwangciso zabo zomxholo ukubeka phezulu kuGoogle okanye kuYouTube.
Twitch streamers -I-Twitch igxile ikakhulu kukusasaza iividiyo ezibukhoma. Kwabo bajonge ukuphumelela kule niche, ukonyusa umbono kwiYouTube yindlela eqinisekisiweyo yokunyusa ukubonwa kwezinto eziphilayo.
Brands - Inani elikhulayo lamashishini kunye nabathengisi batyala imali kwintengiso yevidiyo ebonakaliswe ukubuyisela imbuyekezo ephezulu kutyalo-mali lokuthengisa. Iividiyo ziyaziwa ngokukwazi ukukhulisa ukuzibandakanya kwabathengi, ukomeleza ukukhumbula uphawu kunye nokuphucula amazinga okuguqula. Ngapha koko, ngaphezulu kweepesenti ezingama-70 abathengi bathengayo emva kokubukela ividiyo malunga nayo kwiYouTube. Iimveliso ezijonge ukunyusa intengiso yazo kunye nokubandakanyeka kwabathengi kuya kuxhamla ngokutyala imali kwiimbono zikaYouTube.
Ngaphandle kobu bugcisa, abaphembeleli, abaphononongi bemveliso, abahlekisi, iingcali ngezemali, kunye nabahlohli banokukhulisa ishishini labo kwaye baseke ubukho obuqinileyo be-intanethi ngokuthenga iimbono zeYouTube.
Kutheni iimbono zikaYouTube zibalulekile
Ngokwe-Statista, iYouTube inabasebenzisi abazibhiliyoni eziyi-1.86 kwihlabathi liphela ngo-2021. Iibhiliyoni zeeyure zevidiyo zibukelwa yonke imihla ngababukeli bazo zonke iindidi zobudala. Ababukeli babukela iividiyo zikaYouTube kwizixhobo ezininzi, kubandakanya iilaptops, iimobiles, iitafile, iTV eqhagamshelweyo, kunye needesktops. Ixesha eliqhelekileyo abalichitha kuYouTube limalunga nemizuzu engama-41.
Ngaphezulu kwesithathu-kwesine sabantu base-US abaxhomekeke kuYouTube, iqonga yindawo ekuya kuyo abathengisi, amashishini kunye nabantu abafuna ukubonisa italente yabo okanye badume. Ngokophando, iipesenti ezingama-71 zabathengisi be-B2B batyala imali ekudaleni iividiyo zeYouTube ukonyusa ulwazi lophawu, ukufumana abalandeli kunye nokunyusa izinga lokuguqulwa. Ehlabathini lonke, iipesenti ze-40 zabathengi bathi bathenge into emva kokubukela ividiyo malunga nayo kwiYouTube.
Izizathu eziphezulu zokuba kutheni ababukeli babukele iividiyo zikaYouTube ziquka:
Uhlaziyo kwiimveliso/iinkonzo ezintsha ezivela kwiibrendi
Nokuba ufuna ukuthengisa ishishini lakho, bonisa ilizwe izakhono kunye neetalente onazo, okanye ufuna ukwenza imali kwiYouTube, ukuqinisekisa ukuba ividiyo yakho inokufikelela ngokubanzi kubalulekile.
Izizathu eziphezulu zokuthenga iimbono zeYouTube
Iimetrics zokubandakanya zikaYouTube ezinje ngembono, imirhumo, kunye nezinto ezithandwayo zibonisa indlela ababukeli abanxibelelana ngayo nevidiyo yakho. Iimbono zikaYouTube zibhekisa kwinani lamaxesha ividiyo yakho kaYouTube ebukelwe ngayo. Iimbono zikaYouTube zizalathisi ezibalulekileyo zevidiyo yakho kaYouTube ethandwa kakhulu.
Nangona kunjalo, ngenxa yokuba ngaphezulu kweeyure ezingama-500 zomxholo wevidiyo ulayishwa ngomzuzu ngamnye kuYouTube, ukuthatha ingqalelo yababukeli kungumngeni.
Nazi ezinye izizathu zokuthenga iimbono zikaYouTube:
Beka phezulu kuYouTube nakuGoogle -Imibono ibalulekile ukonyusa umgangatho wevidiyo yakho kuYouTube nakwiinjini zokukhangela ezifana noGoogle. Umgangatho ophezulu kumaphepha okukhangela kunye neYouTube inceda ukwenza ividiyo yakho ibonakale ngakumbi kwabo bafuna umxholo ofanayo.
UYouTube usebenza njengoko esenza uGoogle. Abasebenzisi bakhangela besebenzisa amagama angundoqo, kwaye iziphumo zevidiyo ziboniswa kuYouTube. I-algorithm yeYouTube imisela ukuba zeziphi iividiyo eziya kubonakala ngokusekwe kuluhlu lwezinto ezininzi ezinje ngokubalwa kwababhalisi, iimbono, ukuthanda, izimvo kunye nezabelo. Ngokusisiseko, i-algorithm yeYouTube ijonga iividiyo ezifanelekileyo ezinokuzibandakanya okuphezulu (imibono, ukuthanda, ababhalisile) ukubeka phezulu kwiziphumo zephepha lokuqala. Oku kuthetha ukuba okukhona inani leembono onazo zevidiyo yakho, kokukhona kunokwenzeka ukuba ividiyo yakho ibekwe phezulu kwiziphumo zokukhangela. Esona sicwangciso silungileyo sokunyusa iimbono, ngakumbi xa usaqala, kukuhlawula iimbono.
Fumana ukuthandwa ngakumbi -Omnye wemibuzo eqhelekileyo abantu abaqalayo kwiYouTube inxulumene nokubaluleka kweembono ngaphezu kokuthandwa. Ukuba uyaxoxa malunga nokuba kufuneka uthenge iimbono okanye uthanda ukonyusa ukuthandwa kunye nenqanaba, qaphela ukuba awunakuthanda izinto ngaphandle kweembono. Ngamanye amazwi, ababukeli bakho kufuneka babukele ividiyo kuqala ukuze bakwazi ukuyithanda. Abathengisi kunye nabasebenzisi beYouTube bathenga iimbono zeYouTube njengenyathelo lokuqala lokufumana ukuthandwa ngakumbi kunye nabalandeli.
Yakha isiseko sababhalisi -Ukufumana abantu abaninzi ukuba babukele ividiyo yakho yeyona ndlela ilungileyo yokwakha isiseko sakho sababhalisile. Okukhona linani lababhalisi kwijelo lakho likaYouTube, kokukhona lisiba phezulu kwiziphumo zokukhangela zikaYouTube.
Yenza imali ngeevidiyo zakho -Abasebenzisi abaninzi bakaYouTube bafumana umvuzo omhle ngenkqubo yeNtsebenziswano kaYouTube. Ukujoyina inkqubo, kufuneka ube nababhalisi be-1,000, kwaye iividiyo zakho kufuneka zibe zibukelwe iiyure ezingama-4,000 kwiinyanga ezilishumi elinesibini ezidlulileyo. Nje ukuba iividiyo zakho zinezi mbono zininzi kunye nababhalisile, unokuvumela izixhobo kwiYouTube ezinje:
AdSense Google -IGoogle AdSense yindlela elula yokwenza imali ngokubeka iintengiso kwividiyo yakho yeYouTube. Inethiwekhi kaGoogle idibanisa amashishini ajonge ukubeka iintengiso kumajelo aziwayo akwaYouTube kunye nabasebenzisi beYouTube abafuna ukwenza imali kwitshaneli yabo.
Ngokutsho kolunye uqikelelo, iimbono ezingama-20,000 zinokukunceda wenze i-$28 ukuya kwi-$47 ngosuku. Oku kuguqulela kwi-$460 ukuya kwi-$769 ngenyanga kunye ne-$5,600 ukuya kwi-9,353 yeedola ngonyaka.
Intengiso yokuthengisa -Xa uhlawulela iimbono, unokuba liqabane likaYouTube elikuvumela ukuba uthengise izinto zentengiso ezilishumi elinambini kwiakhawunti yakho yeYouTube. Unokuzithengisa iimveliso zakho kwijelo lakho likaYouTube.
Intengiso ephembelelayo -Ukuba ijelo lakho leYouTube linenani elikhulu leembono, oko kubonisa kumashishini ukuba ukwimeko yokuphembelela abanye ukuba benze isigqibo sokuthenga. Amashishini ahlawula abasebenzisi be-YouTube abadumileyo ukukhuthaza iimveliso zabo.
Yandisa iimbono zezinto eziphilayo-Esona sizathu siphambili sokuthenga iimbono zeYouTube kukunyusa iimbono zendalo, ukuthanda, kunye nababhalisile. Xa ungumntu oqalayo, ukuba neembono ezimbalwa kunye nababhalisile kunokuthetha ukuba ividiyo yakho ayibonwa. Ukwenza abantu babukele ividiyo yakho kuya kuthatha ixesha elininzi kunye nomzamo. Uninzi lwabantu lutyekele ekujongeni iividiyo esele zinentsholongwane okanye ezibukelwe amawakawaka amaxesha. Ukuthenga iimbono zeYouTube kunceda ukuba ufumane umfutho owufunayo ukutsala iimbono zezinto eziphilayo, izinto ezizithandayo, kunye nababhalisile.
Cokisa isicwangciso sakho sikaYouTube Nje ukuba unyuse inani leembono zezinto eziphilayo, ungasebenzisa imetriki ukucokisa isicwangciso sakho sevidiyo yeYouTube. Ngokubeka esweni iimbono, unokuqonda ngcono ukuba i-thumbnail yakho ibisebenza kakuhle, isihloko sinyanzelekile, kwaye umxholo wakho ufanelekile na ukubukelwa.
Yakha ukuthembeka -Abantu bakhetha ukubukela iividiyo ezijongwayo nezithandwa ngabanye abaninzi. Kunokuba uqale kwiimbono ezimbalwa, kulula kakhulu ukonyusa iimbono ngokuthenga iimbono zeYouTube. Iziteshi zeYouTube ezidumileyo zibonwa njengezithembekileyo kwaye zithembekile. Inyathelo lokuqala lokuseka ukuthembeka kukuthenga iimbono zeYouTube. Xa ijelo lakho leYouTube libonwa njengelithembekileyo, liya kutsala iimbono ezininzi zezinto eziphilayo, ukuthanda, izimvo kunye nababhalisile.
Yazisa iwebhusayithi yakho -Ukufumana iimbono ezingakumbi kunye nababhalisile yindlela entle yokufumana abaphulaphuli ojolise kubo ukuba bakuthembe. Ukuba ujonge ukonyusa iYouTube ukukhuthaza iwebhusayithi yakho, ukuthenga iimbono zeYouTube kunokukunceda ufezekise le njongo. Ukongeza i-CTA esebenzayo (i-call to action) iqhosha kunye nekhonkco kwividiyo yakho iya kukunceda ngqo ababhalisile kwiwebhusayithi yakho. Ukuvumela ukwabelana ngemidiya yoluntu kuya kunceda ukukhulisa itrafikhi yewebhusayithi yakho.
Ukuthenga iimbono zikaYouTube kumthombo othembekileyo kuya kukunceda ukuba ujolise kubantu abanokuba nomdla kumxholo owunikezayo. Aba bantu banokuthi bandwendwele iwebhusayithi yakho kwaye bathenge inkonzo yakho okanye imveliso, benyusa ingeniso yakho.
Ngaphezulu kwayo yonke into, xa uthenga iimbono zeYouTube, unokukhawuleza ukulandelela indlela yakho yokufezekisa isicwangciso sakho seYouTube ngo-2022. Oku kuya kukhulula ixesha lakho njengoko awuyi kuchitha ixesha elininzi kunye nomzamo ekuqokeleleni ababhalisi abaninzi kunye nokuphucula iimbono zevidiyo. Unokusebenzisa ixesha lakho lasimahla ukulungisa iqhinga lakho likaYouTube, kubandakanya ukwenza umxholo okumgangatho ophezulu, ukucokisa amaqhinga akho okuthengisa kwi-intanethi, kunye neminye imiba yokuyila.
Ngoku ukuba unokuqonda malunga nokuba zithetha ntoni iimbono zikaYouTube kunye nezibonelelo zokuthenga iimbono zeYouTube, inyathelo elilandelayo kukufumana indawo efanelekileyo yokuthenga iimbono zikaYouTube. Ngeendawo ezininzi (kubandakanywa nobuqhophololo) ezibonelela ngeembono zeYouTube kunye nababhalisi, kunokuba ngumngeni ukufumana indawo eyiyo.
Nanga amanyathelo aqinisekisiweyo okuthenga iimbono zikaYouTube ezihambelana nesicwangciso sakho sika-YouTube sika-2022.
Iindlela eziqinisekisiweyo zokuthenga iimbono zeYouTube ngo-2022
Ukuzingela umthengisi weembono zeYouTube kunokuthatha ixesha kwaye kube ngumngeni xa ungaqinisekanga ukuba ujonge ntoni. Umnikezeli ofanelekileyo unikezela ngeenkonzo ezisemgangathweni zeprimiyamu, iipakethe ezifikelelekayo, ukwenziwa ngokwezifiso, ukukhuselwa komgaqo-nkqubo wembuyekezo, isiqinisekiso sokuzalisa kwakhona, kunye nenkxaso ebanzi yabathengi.
Nazi izinto eziphambili onokuzivavanya xa uthenga iimbono zikaYouTube:
Ukulinganisa kunye nokuphononongwa - Oko abathengi bathi malunga ne-brand kudlala indima ebalulekileyo ekwenzeni izigqibo zokuthenga. Kwixesha ledijithali, abathengi bafunda naphi na ukusuka kwi-6 ukuya kwi-11 ukuphononongwa ngaphambi kokuba bathathe isigqibo sokusebenzisana nenkampani. Jonga ukuba umthengisi weembono zikaYouTube unophononongo olulungileyo kunye neereyithingi kwiindawo zomntu wesithathu ezifana neTrustpilot.
I-Trustpilot yindawo ethembekileyo yokulawula umthengi ebonisa uphononongo lokwenyani lwamashishini kubathengi. Jonga i-Trustpilot yokukala ngaphezulu kwe-4.5 engabonisa ukuba inkampani inokuthenjwa. Ngokomzekelo, i-YTPal inomlinganiselo we-4.7 kwi-Trustpilot kwaye ithathwa njengeyona ndawo ilungileyo, indawo esemthethweni yokuthenga iimbono, ukuthanda, ababhalisile, kunye nokunye okuninzi.
izicwangciso -Vavanya umboneleli wemibono kaYouTube ngokusekwe kwizicwangciso zabo kunye neepakethi. Ukuba ungumqali onohlahlo lwabiwo-mali olulinganiselweyo, jonga ukuba indawo ibonelela ngepakethi yasimahla yeYouTube, kubandakanya iimbono zasimahla zeYouTube kunye nababhalisile. I-YTPal ibonelela ngepakethi yokuqalisa yasimahla yeYouTubers ekuvumela ukuba ufumane ababhalisile abalishumi kwiiyure ezilishumi elinambini.
Ukukhetha ipakethe yasimahla yindlela entle yokuvavanya umgangatho weemveliso kunye neenkonzo ezinikezelwa yisayithi phambi kokuba uzibophelele kuzo ngokupheleleyo. Wakuba wanelisekile ngesantya sonikezelo, ukuphendula, kunye nomgangatho wenkonzo, ungaqhubela phambili ekuthengeni ezinye izicwangciso.
Ezinye iipakethe zesicwangciso esinomtsalane esihlawulweyo ziqala ngexabiso eliphantsi njengeedola ezingama-20 ngenyanga. Unokukhetha ukukhetha iimbono ze-1000 okanye iimbono ze-100,000 kunye nezicwangciso ezihlawulwayo eziqinisekisiweyo.
Ukuba ufuna yonke into Iphakheji yeYouTube oko kubandakanya ukuthanda, izabelo, ababhalisile, kunye nezimvo ezinezimvo, kungcono ukhethe iipakethe zokujonga. Umzekelo, iphakheji yokujonga i-1000 ibandakanya ukuthanda okungama-50, izabelo ezili-100, kunye nezimvo ezili-10. Ngepakethe yeembono ze-5000, ungafumana ukuthanda okungama-400, izabelo ezingama-2000, kunye nezimvo ezingama-50.
Ukuthenga iphakheji yeembono zeYouTube yindlela entle yokonga imali ngelixa ufumana inani leembono, ukuthanda, izimvo, kunye nezabelo ozifunayo.
Uluhlu lweenkonzo -Xa ukhangela indawo efanelekileyo yokuthenga iimbono ngo-2022, into ephambili yokuvavanya kukuba ngaba umnikezeli unikezela uluhlu lweenkonzo. Ngelixa unokufuna iimbono zeYouTube, ukuqala, njengoko uqhubela phambili, uya kufuna ezinye iinkonzo ezininzi, kubandakanya
Uvavanyo lweSitayile sikaYouTube
Uyilo lwegraphic yeYouTube
Izabelo kunye nezinto ezithandwayo.
Unokufuna ukwandisa ubukho bakho bemidiya yoluntu kwezinye iziteshi ezinje ngeTwitter, Instagram, Twitch, okanye Pinterest. Esikhundleni sokufikelela kwiindawo ezininzi kwezi nkonzo nganye, ingcamango ehlakaniphile ukukhetha indawo enikezela zonke ezi nkonzo phantsi kophahla olulodwa.
Iimbono zokwenyani kunye nabalandeli -Enye yezona zinto zibalulekileyo ekufuneka ziqwalaselwe xa uthenga iimbono zihambelana nobunyani. Zininzi iisayithi ezibonelela nge-bots kunye nabalandeli bobuxoki okanye iimbono zokunyusa amanani akho eYouTube. Isoftware kaYouTube, nangona kunjalo, yenzelwe ukukhangela kunye nokucima aba balandeli bobuxoki kunye ne-bots.
Indawo ethembekileyo enikezela ngeenkonzo zeprimiyamu iya kubonelela ngokuthandwa kweYouTube, iimbono, kunye nezimvo zesiko kubantu bokwenyani.
Ukhuseleko kunye nemfihlo -Enye yezona zinto zibalulekileyo ekufuneka uzijonge kwindawo ethengisa iimbono zikaYouTube kukuba bagcina imfihlo. Vavanya umgaqo-nkqubo wabucala wesayithi kwiwebhusayithi yabo kunye nendlela abaqokelela kwaye basebenzise ngayo ulwazi lwabucala. Indawo efanelekileyo ayizukubuza igama eliyimfihlo ngelixa usamkela uqokelelo lwedatha olufanelekileyo, ukusetyenzwa, kunye neendlela zokugcina. Kufuneka kwakhona babe nemilinganiselo yokhuseleko engqongqo ukukhusela iinkcukacha zakho zobuqu kunye nedatha yentengiselwano ngokuchasene nokufikelela okungagunyaziswanga okanye ukubhengezwa.
Iwebhusayithi kufuneka iphinde ikhankanye ukuba isebenzisa iqonga lonxibelelwano elikhuselekileyo le-SSL elifihliweyo.
Isiqinisekiso sokugcwalisa kwakhona -Isiqinisekiso sokuzalisa kwakhona yenye yezinto ezibalulekileyo ekufuneka uzijonge xa ​​uthenga iimbono zeYouTube ngo-2022. Oku kubalulekile kuba nangona ufumana inani leembono ozithengileyo, ukubala kunokuhla kwiYouTube ngenxa yezizathu ezahlukeneyo. Umboneleli wembono weYouTube ofanelekileyo uya kubonelela ngesiqinisekiso sokuzalisa kwakhona ukuqinisekisa ukuba unenani elichanekileyo lokujonga, simahla.
Izantya zokuhanjiswa -Xa uthenga iimbono zeYouTube, ngokwendalo ulindele ukuhanjiswa okukhawulezileyo, okukunika iziphumo ezikhawulezayo. Ukukhetha eyona ndawo ilungileyo yokuthenga iimbono zeYouTube ngo-2022 kuya kubandakanya ukwazi ixesha labo lokutshintsha ukuhambisa izimvo. Umboneleli olungileyo uya kuqalisa unikezelo kwiiyure ezingama-24 kwaye aqhubeke yonke imihla de kube oko kujongwe kunikezelwe. Iisayithi eziphezulu ziya kuzisa iimbono ngokuqhelekileyo ngaphakathi kweentsuku ezimbalwa. Ukuba uyathandabuza, thetha neqela lenkxaso yabathengi ukuze uqinisekise ixesha lokuguqula izimvo zikaYouTube.
Iisayithi ezithembekileyo ezifana ne-YTPal zibonelela nge-100 yepesenti yokuhanjiswa okuqinisekisiweyo kunye nesiqinisekiso sokubuyisela imali sokhuseleko olongezelelweyo.
Ukuodola amava -Amava okuthenga abhekiselele kuyo yonke inkqubo eyenziwa ngumthengi, ukusuka ekutyeleleni indawo ukuya ekugqibezeleni ukuthenga. Indawo yomthengisi weembono zikaYouTube kufuneka kube lula ukuhambahamba, ingaxutywanga, kwaye icwangciswe. Kuya kufuneka ukwazi ukubeka iodolo ngokukhawuleza ngaphandle kokucofa amakhonkco amaninzi okanye ukuzingela iqhosha lokuthenga. Ukuqala kwinkqubo elula yokubhalisa, ukukhangela iimbono zeYouTube kwizicwangciso zokujonga, yonke into kufuneka ingabinangxaki kwaye ikhawuleze.
Uxhaso lwabathengi -Ngaphandle kokuzichazayo kunye nojongano olusebenzisekayo, indawo efanelekileyo yokuthengisa iimbono zeYouTube iya kubonelela ngenkxaso ebanzi yabathengi. Oku kunokubandakanya icandelo le-FAQ elizinikeleyo eliphendula eyona mibuzo ixhaphakileyo, iindlela ezahlukeneyo zokuqhagamshelana nokhathalelo lwabathengi, njenge-imeyile okanye ifom yombuzo.
Inkampani ephendulayo iya kubuyela kuwe ngokwesiqhelo kwiiyure ezingama-24 okanye kwiiyure ezingama-72.
nkqubo Refund - Njengayo yonke enye intengiselwano, ukuthenga iimbono kwisiza kunokuthwala umngcipheko onokubandakanya ukungaziswa kweenkonzo okanye imiba yobulunga bemveliso. Iindawo ezingcono kakhulu zokuthenga iimbono ziya kuba nomgaqo-nkqubo wembuyekezo ochazwe ngokucacileyo ochaza phantsi kweziphi iimeko ukubuyisela imali kunokukhutshwa kunye nendlela abathengi abanokufaka ngayo ibango elifanayo.
Xa kuziwa kumgangatho wemveliso, iindawo ezininzi ziya kufuna ukuba unikeze ubungqina bokuba inkonzo ethengiweyo ayikho ngokwenkcazo kwisayithi.
Ngaphandle kwezi, kuya kufuneka kwakhona ukhangele ukuba isayithi inomgaqo-nkqubo wokurhoxisa umrhumo. Oku kukunika inkululeko yokurhoxisa umrhumo wakho xa ungasafuni ukuthenga iimbono okanye imirhumo.
Umzekelo, i-YTPals inomgaqo-nkqubo wembuyekezo wokurhoxisa umrhumo okuvumela ukuba urhoxise umrhumo ukuba angonelisekanga yimveliso okanye inkonzo. Unokufumana imbuyiselo epheleleyo kwaye urhoxise umrhumo wakho ngokuqhagamshelana nokhathalelo lwabathengi phakathi kweentsuku ezisixhenxe zomhla wentlawulo yorhumo.
Phakamisa isicwangciso sakho seYouTube ngo-2022 ngeembono zikaYouTube
Ukwenza iividiyo ezikumgangatho ophezulu sisitshixo sokutsala kunye nokugcina abalandeli. Ngenxa yokugcwala okuphezulu kunye nokhuphiswano oluqinileyo kwiYouTube, kunzima kwabaqalayo ukufumana abalandeli kunye neembono eqongeni. Esi sizathu sokuba kutheni iisayithi apho unako ukuthenga izimvo YouTube, ezithandwayo, kunye nababhalisi, zithandwa kakhulu. Ukuba ujonge ukukhulisa ubukho bakho beYouTube ngo-2022, thatha amanyathelo adweliswe ngasentla ukukhetha eyona ndawo ilungileyo yokuthenga iimbono zeYouTube kunye nabalandeli.
Ukushwankathela, indlela eqinisekisiweyo yokuthenga iimbono zeYouTube ngo-2022 kukuqinisekisa ukuba umthengisi uyabonelela:
Inkonzo ekumgangatho ophezulu
Iphakheji yokuqalisa yasimahla eneendlela zokuphucula
Uluhlu olubanzi lweenkonzo kunye nezicwangciso
Ukuhanjiswa ngokukhawuleza kunye neziphumo
Isiqinisekiso sokubuyiselwa kwemali kunye nomgaqo-nkqubo wokubuyiselwa kwemali
Umgaqo-nkqubo wokugcwalisa kwakhona
Ujongano olulula, olusebenziseka lula kwaye ujonge inkqubo
Ukhuseleko lwe-100 ekhulwini kunye nemfihlo
Umgangatho ophezulu, iimbono zeYouTube eziyinyaniso
24 x 7 inkxaso yabathengi
Uphononongo oluhle kunye neereyithingi
Ezona ndawo zithengisa kakhulu kuYouTube zikunika amandla okukhulisa ukukhula kwakho ngokufumana iimbono zokwenyani, abalandeli kunye nezinto ozithandayo. Ukushiya umsebenzi onzima wokukhuthaza ukuzibandakanya kumboneleli wemibono kaYouTube kuya kukuvumela ukuba ugxile kumdla wakho kunye nomxholo.
Iimbono zikaYouTube zongezwa kwinqwelo yakho.
Ababhalisi abangama-50 (i-20 yeedola) Ababhalisi abangama-100 (i-30 yeedola) Ababhalisi abangama-300 (i-45 yeedola) Ababhalisi abangama-500 (i-60 yeedola) Ababhalisi abangama-1000 (i-100 yeedola) Ababhalisi abangama-2000 (i-180 yeedola)
Ukuthandwa okungama-100 ($ 13.50)Ukuthandwa okungama-200 ($ 20)Ukuthandwa okungama-300 ($ 25)Ukuthandwa okungama-600 ($ 40)Ukuthandwa okungama-1200 ($ 70)Ukuthandwa okungama-2500 ($ 140)Ukuthandwa okungama-5000 ($ 270)Ukuthandwa okungama-10000 ($ 530)Ukuthandwa okungama-15000 ($ 790)Ukuthandwa okungama-20000 ($ 1050)Ukuthandwa okungama-30000 ($ 1550)
Izimvo ezili-10 ($ 20)Izimvo ezili-20 ($ 35)Izimvo ezili-30 ($ 50)Izimvo ezili-50 ($ 80)Izimvo ezili-100 ($ 140)